स‌ंसद अधिवेशन बैशाख २३ गते आह्वान गर्न सिफारिस
काठमाडौं, १४ बैशाख । सरकारले संघीय स‌ंसद अधिवेशन बैशाख २३ गते आव्हान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफरिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्र...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताअघि केहि समस्या देखिए पनि हल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । नेकपा(एमाले)का संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्र...
काठमाडौँ । विनासकारी भुकम्पपछि पिडितका नाममा विभिन्न दातृ निकायले एक खर्व २० अर्व भन्दा बढी रकम आफुखुसी सिध्याए । घरबारविहिन नागरिकका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट पुर्ननि...
काठमाडौं, १२ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सहज अवस्था आएको बताउनु भएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा. डा. पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठ...
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका युवा नेताहरुले सामुहिक रुपमा सिघ्र महाधिवेशनको मागसहित संयुक्त अवधारणापत्र केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेका छन् ।
काठमाडाैं, ११ बैशाख । १३ अाैं लाेकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जे...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जथाभावी नबोल्ने चेतावनी दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले ...
काठमाडौ,१० बैशाख । विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि बनेको छानविन समितिले पूर्वडिआईजी गोविन्द निरौलालाई पक्राउ गरी बयान स...
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मानजनक , समानता र न्यायोचित रुपमा पार्टी एकता गर्ने केपी ओलीसँग सहमति भएको खुलासा गरेका छन् ।
काठमाडाैं, ९ बैशाख । पार्टी एकताका लागि तय गरिएको सम्भावित मिति टरे पनि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले सार्वजनिक रुपमा एकताको सन्देश दिँदै कर्याकर्तालाई आश्वस्त पार्ने ...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको काठमाण्डौ जिल्ला भेलामा महामन्त्री सहितका नेताहरु सभापति शेर बहादुर देउवा माथि खनिएका छन् । सभापति देउवा इतरका नेताहरुले उनको कार्यशैलीप्रत...